I-LORENZEN WRIGHT KUNYE NE-EX SHERRA ROBINSON YABANTWANA BANAMHLANJE - IINDABA
I-Lorenzen Wright kunye ne-Ex Sherra Robinson yaBantwana banamhlanje
U-Lorenzen Wright ushiye ngasemva abancinci abathandathu kunye nowayesakuba ngumfazi wakhe, u-Sherra Wright Robinson, emva kokuba ebulewe ngo-2010. Namhlanje, uRobinson uvalelwe, kwaye ukhawuleze wachitha i-inshurensi yobomi ekhusela ukujonga abantwana bakaWright.
Namhlanje, uSherra Wright uneminyaka engama-50 kwaye uvalelwe kwi-Debra Kulungile. IZiko likaJohnson Rehabilitation, ngokuhambelana iirekhodi zakhe zasentolongweni .
U-Wright-Robinson wagwetywa iminyaka engama-30 entolongweni enxulunyaniswa nokuphulukana nobomi buka-Lorenzen Wright kwaye unokufumana ilungelo lokufumana ingqawule emva kokusebenza i-30% yesigwebo sakhe, okanye malunga neminyaka eli-9 entolongweni. Umhla wokuvavanywa wabekwa kummangalelwa kunye noBilly Ray Turner ngoJuni 4, 2021, kwaye ityala lakhe licwangciselwe ukuqala ngoJanuwari 2022, ngokwe-Associated Press .
Ukunyamalala kukaWright kunye nokubulala kunokubonakaliswa kwinqaku lokuqala le-Infamy: Xa Udumo Luguquka Lubulalayo ngokuhlwanje kwiVH1. Isiqendu sidlala ngo-10 ebusuku. Ixesha laseMpuma.
Nantsi into efanelekileyo ukuba uyazi:
Uninzi lwaBantwana bakaLorenzen Wright ngaBantu abaDala abaDala ngoku kunye neeNdodana zaKhe zokudlala iBasketball yeBhola
Iwele lam @lungelo pic.twitter.com/4UNMzWAiC3
ukudanisa neenkwenkwezi umqhubi we-indy
-Lorenzen Wright Jr (@iamlorenzen) Epreli 13, 2020
U-Lorenzen Wright wayenabantwana abasixhenxe abanoSherra Wright, owasweleka njengomntwana omncinci, ngokweendaba zeABC . USierra Wright wazalwa ngo-2002 kwaye wasweleka emva kweenyanga ezili-11 emva kokuphulukana nomntwana ngesiquphe.
Uninzi lwabaselula abancinci besibini okwangoku ngabantu abadala. U-Lorenzen Wright Jr., olona sana ludala, uneminyaka engama-26 kwaye wenza i-basketball kwiYunivesithi yaseRobert Morris, ngokweprofayile yakhe .
Umntwana omdala wesibini, u-Loren Wright, wathi kwisicelo sikamama wakhe ukumamela abantakwabo bavaliwe kwaye bathi balungile, ngokweSibheno sezoRhwebo . Ucele ukuba uluntu ngokubanzi luhloniphe ubucala babo.
Sonke sizivalelene kakhulu, siziva ngathi asiyidingi kakhulu into yokunceda, ngenxa yokuba sinomama kunye nesithandathu, kwaye silungile, utshilo uLoren Wright , ngokuhambelana nenqaku.
U-Lorenzen Vern Gagne Wright Jr. ♥ ️ ndiyakuthanda pops pic.twitter.com/ony6u0nCuJ
-Lorenzen Wright Jr (@iamlorenzen) Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu ku-Matshi 2020
U-Lorenzo Wright kunye noSherra Wright ukongeza banamawele, uLamar noShamar, unyana ogama linguLawson kunye nentombi, uSofia, okwishumi elivisayo, ingxelo yeABC. Amawele okwangoku ngabadlali bebhola yomnyazi kwi-Yunivesithi yase-Illinois e-Edwardsville, ngokweThe Telegraph .
U-Lorenzen Wright wabona uNyana wakhe edlala iBhola yeBhasikithi kusuku olungaphambi kokubulawa kwakhe kunye no-Sherra Wright ngokukhawuleza bechitha intlawulo ye-Inshurensi yoBomi.
Ndiyakuthanda Sisi ♥ ️. pic.twitter.com/XU7BGkXsfv
-Lorenzen Wright Jr (@iamlorenzen) Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 2020
U-Lorenzen Wright noSherra Wright baqhawule umtshato ngoJanuwari 2010, malunga neenyanga ezisixhenxe ngaphambi kokubulawa kwakhe, Imidlalo ebonisiweyo . Wayehlala eAtlanta kwaye waya eMemphis, eTennessee ukuya kubona abantwana bakhe abathandathu ngoJulayi 18, 2010, eli nqaku laqhubeka. Ngolo suku, wayebukele unyana wakhe omdala, uLorenzen Wright Jr., edlala ibhola yomnyazi, inqaku latsho.
Amapolisa ayenezizathu ezininzi zokurhanela uSherra Wright ngokulahleka komyeni wakhe wangaphambili, inqaku latsho. U-Lorenzen Wright wayene-inshurensi yobomi ye-inshurensi yobomi njengemeko yokuqhawula umtshato, eyabhatalwa kuSherra Wright emva kweenyanga ezili-12 emva kokuphulukana nobomi, ngokuhambelana neSports Illustrated. Yenzelwe abantwana bakhe, nangona wayichitha ekhayeni, ezimotweni kunye neefenitshala nangeeholide, latsho inqaku.
Kwiinyanga nje zokufumana i-1 yezigidi zeedola, uWright wayechithe yonke i-5.05 yeedola, latsho inqaku. Uchithe uninzi lwezigidi zeerandi ngeendlela ezibonakala zikhululekile ngokukhululekileyo kwimpilo yabantwana bakhe.
Imicimbi yosapho🧬 pic.twitter.com/1sSW7wGshL
-Lorenzen Wright Jr (@iamlorenzen) NgoNovemba 30, 2019
Utata kaLorenzen Wright kunye nomabi welifa ukuba ipropathi yakhe, uHerb Wright, wamangalela uSherra Wright egameni labazukulwana bakhe, kubika i Sports Illustrated.
Igumbi lenkundla yesiphaluka laseTennessee lisombulule lo mbandela ngokuyalela ukuba kudalwe inkolelo eyenzelwe ukufunda ulutsha. USherra Wright wabizwa njengotrasti, nangona kunjalo enombhalo wokuba makafayilishe kwigumbi lenkundla ingxelo eqhelekileyo yemali efunyenwe yinkolelo nemali ehlawulwayo, latsho inqaku.
Umlobi weSizwe waBadlali beBhola yeBhola ekhatywayo wokulahleka kobomi be- $ 184,000 yayiyekelelwa ukuba ihlawulwe kwinkolelo, inqaku latsho. Idatha yenkundla ephononongwe yiSports Illustrated ibonise ukuba uSherra Wright akaphumelelanga ukubonelela ngeengxelo zobalo ezifunekayo, kwaye ekugqibeleni warhoxa kwimizamo yokugcina ulawulo lwenkolelo. U-Herb Wright wajika waba ngumgcini weengxowa-mali zepenshini, latsho inqaku.
Umama kaLorenzen Wright, uDeborah Marion, wathi kuSherra Wright's Hearing Akakwazanga Ukutyelela Abazukulwana Bakhe
Usapho ❤️ pic.twitter.com/V8Ph9OwLCr
-Lorenzen Wright Jr (@iamlorenzen) Nge-1 ka-Agasti ka-2017
UDeborah Marion, umama kaLorenzen Wright, uxelele inkundla kwi-2019 ukuba ebengekho kwimeko yokubona abazukulwana bakhe, ngokwe-Associated Press . UMarion wathetha kwisimangalo sikaSherra Wright emamele, indawo owayesakuba ngumfazi wenkwenkwezi ye-NBA wangena kwisibophelelo esinoxanduva kumaxabiso ekubulaweni kwakhe ngo-2010, kwidatha yenkundla.
Ndiyayicaphukela le nto yenzekileyo emntwaneni wam, nangona kunjalo eshiyele abantwana bakhe abahle ngethamsanqa, utshilo uMarion, ngokuhambelana neMithombo yeendaba.
URobinson ucele uxanduva lokuququzelela ukubulawa kwabantu abakwinqanaba lokuqala kunye nokuqhutywa kwetyala lokuzama ukubulala ngo-Julayi 2019 kwiNkundla yoLwaphulo-mthetho eShelby County, ngokwe-Associated Press .
Nantsi ingxelo yakhe yasejele:
Ingxelo yasejele kaSherra Wright.
UWright ubanga ukuba uluxolisile uxanduva ngenxa yabantwana bakhe kwi udliwanondlebe nesiBheno sezoRhwebo .
Ndiza kuthi ngenxa yabaselula bam, ndenze esi sigqibo, kwaye ngenxa yabo andizukufaka iinkcukacha ezininzi ezongezelelekileyo ngoku, nangona kunjalo ndiza kuthi yonke le nto ayisiyi ' Oko kubonakala, wacebisa ukupapashwa.
Izigaba: Hollywood Amazon-Prime Iindaba
Iiconson daly umvuzo welizwi
Ujames roday kunye nomaggie lawson babuyelane
publix usuku lomsebenzi
dearra kunye ne ken pranks
Imovie ephawuleka ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka engenakuphikiswa
UJohnny campbell georganne campbell
ubalekela kwi-chateau amazon